Sarimihetsika : Maherin’ny 350 ireo horonantsary alefa mandritra ny RFC -
AccueilVaovao SamihafaSarimihetsika : Maherin’ny 350 ireo horonantsary alefa mandritra ny RFC
11/04/2018 admintriatra Vaovao Samihafa 0
Miditra amin’ny andiany faha-13. Ho ambohi-pihaonan’ny mpankafy sarimihetsika indray ny etsy amin’ny Institut Français de Madagascar na ny IFM Etsy Analakely. Hanomboka ny 13 avrily izao ny hetsika, ary aharitra hatramin’ny 21 avrily. Maherin’ny 350 ireo horonantsary alefa mandritra ny hetsika, ka ao anatin’izany ireo mandray anjara amin’ny fifaninanana. 24 ireo horonantsary voafantina ka ny 8 horonantsary fanadihadiana, 5 horonantsary fanentanana ary 11 horonantsary vokatry ny famoronana. Miisa 77 ireo fandaharam-potoana handefasana izany. Toa ny mahazatra dia mandray vahiny teratany sy vahiny ihany koa ny RFC, ka ireo andrarezina sy manana traikefa eo amin’ny filalaovana, famokarana ary fanatontosana sarimihetsika no ho avy amin’izany. Maherin’ny 40 ireo vahiny nasain’ny RFC tamin’ity taona ity, ka anisan’izany ireo malagasy nanana ny anjara toerana teo amin’ny sehatry ny sarimihetsika. Nasaina manokana amin’ity andiany faha-13 ity kosa ry Raymond Rajaonarivelo, Thomas Lesourd, Mohamed Said-Ouma, Heinz Hermanns ary Cheil oumar Sissiko.
Mikasika ny fifaninanana dia amboara « Zbu d’Or » 10 no hozaraina vaovao amin’ity andiany faha-13 ity ny « Grand Prix RFC » izay handraisan’ireo horonantsary rehetra anjara. Ny horonantsary voafantina amin’io dia handray anjara amin’ny Hancheng Jinzhen International Short Film Festival. Vaovao ihany koa ny lokan’ny mpijery na ny « Prix du Public », ka ny horonantsary niantefan’ny safidin’ny mpijery nanomboka ny 17 ka hatramin’ny 30 avrily dia handray anjara tamin’ny festival Off-Courts any trouville (Frantsa). Hahazo ny anjarany ihany koa ny horonantsary noheverina fa manana talenta miavaka.
Ankoatra ny fandefasana horonantsary dia tolotra manokana amin’ity RFC andiany faha-13 ity ihany koa ny fiofanana amin’ny famoaboasana ny horonantsary iray, izay misokatra ho an’ireo mpanao gazety mikirakira ny kolontsaina. Fiofanana hotanterahina etsy amin’ny IFM ny 16 ka hatramin’ny 20 avrily.